Nahita asa hafa anefa i le pôta taorian’izay ka nifindra asa saingy nanao faolaitra. Namono olona nanakarama azy nandroaka omby izy sy ny namany iray ka maty itsy voalohany. Tsy voaloa mantsy ny karamany. Nirotsaka nifehy an’i pôta ny dinabe nandritra izany ka ankoatra ny fanatonana ity farany nandritra ny dimy andro dia noraofin’ireo tompon’andraikitry ny dina ihany ny ombin-dRtoa Soamiadana miisa 106 ary tsy nisy tafaverina hatramin’izao. Efa noteteziny daholo ireo tompon’andraiki-panjakana tao Melaky saingy nisy nitazona ny dosieny. Ankehitriny nanatona ireo mpandray fitarainana eo anivon’ny fiadidian’ny Repoblika izy noho ny fahasahiranana mianjady aminy sy ny fanagiazana ny fananany koa andrasana izay mety ho tohiny. Efa miroso amin’ny fampakarana ny dosie mantsy ireto tompon’andraikitra. Nambaran-dRtoa Soamiadana fa nisy tamin’ireo ombiny no efa naparitaka miandalana tamina toerana samihafa.